Si dhakhso leh: Maxuu Waxqabadka u Fure u yahay Suuqgeyaha Casriga ah | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 29, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Si aad ugu guuleysato jawiga dhaqsaha badan ee dhaqdhaqaaqa maanta iyo adeegsadaha ugu dambeeya, suuqleyda waxay u baahan yihiin xal deg deg ah, aamin ah, dabacsan oo ku bixin kara waxyaabaha waqtiga ku jira. Mashruuca 'Fastly' wuxuu dardargeliyaa boggaga internetka iyo barnaamijyada moobiilka iyadoo ku riixeysa waxyaabaha ku dhow kuwa isticmaala, iyagoo siinaya khibrado hagaagsan oo aamin ah adduunka oo dhan. Furaha suuqgeynta caqliga leh ayaa ahmiyada la siinayo waxqabadka si loo wanaajiyo beddelaadyada.
Guudmarka Xalka Degdeg ah
Si dhakhso leh waa a shabakada bixinta nuxurka (CDN) kaas oo siiya ganacsiyada inay si buuxda gacanta ugu hayaan sida ay ugu adeegaan nuxurka, marin aan horay loo arag ee waxqabadka waqtiga-dhabta ah Analytics iyo awoodda lagu kaydiyo waxyaabaha aan la saadaalin karin ee beddelaya (sida dhibcaha cayaaraha ama qiimaha saamiyada) cirifka.
Macaamiisha si dhakhso leh waxay u sameeyaan waxyaabaha dhijitaalka ah sida fiidiyowyada la socon karo, bogagga wax soo saarka, maqaallada, iwm. Oo laga heli karo websaydhadooda iyo barnaamijyadooda barnaamijyada Internet-ka laga heli karo (martigeliyey) (APIs). Macaamiilku wuxuu abuuri karaa nuxurka (waxyaabaha macmiilku soo saarey) sida bogga sheyga cusub ama fiidiyowga, sidoo kale macaamiisha dhammaadka macaamiishiisa (sida faallooyinka isticmaalaha soo saaray). Si dhakhso leh CDN ayaa markaa ka dhigaysa gudbinta waxyaabahaas mid wax ku ool ah iyada oo si ku meelgaar ah loogu kaydiyo nuqulada goobaha dhexdhexaadka ah ee ugu dhow isticmaalaha ugu dambeeya. Nidaamka keydinta nuquladan waxaa loo yaqaan "caching," ka saarista waxyaabaha duugoobay waxaa loo yaqaan "nadiifin", goobaha adeegga ay ku keydsan yihiinna waxaa loogu yeeraa "PoPs."
Si dhakhso leh u dhig cutubyada kaydka kaydka meelaha muhiimka ah ee juqraafi ahaan, mid kasta oo ka mid ahna loo gudbiyo barta joogitaanka (PoP). POP kastaa wuxuu ka kooban yahay koox ka mid ah server-yada si dhakhso leh u kaydiya. Marka isticmaalayaasha dhammaadka ay codsadaan walxaha macmiilka ka kooban, Si dhakhso leh uga samatabbixiya hadba meelaha kaydka ah ee ugu dhow isticmaale kasta oo dhammaad ah.
Degdeg ah wuxuu awood siiyaa tobanaan kun oo bogag internet ah oo loogu talagalay shirkadaha kala duwan oo ka kala socda ganacsiga yaryar iyo kuwa dhex dhexaadka ah illaa waaxyaha shirkadaha waaweyn, ee ka hawlgala warshadaha kala duwan (oo ay ku jiraan daabacaadda dhijitaalka ah, e-commerce, fiidiyowga iyo maqalka tooska ah, SaaS, iyo safarka & martigelinta) . Macaamiisha hadda waxaa ka mid ah Twitter, Hearst, Stripe, GitHub, BuzzFeed, KAYAK, Dollar Shave Club iyo About.com.
Maxay suuqyayaashu uga taxadarayaan CDN-yada
Kooxda horumarinta waxay ku tiirsan yihiin inay dhisaan waxyaabo cabirkoodu u dambeeyo iyo kan ugu dambeeya, halka suuq geyntu ay rabto waxa xiga ee weyn - oo ay u baahnaayeen shalay. Xawaaraha bogga iyo waxqabadka ayaa muhiim u ah khibradda isticmaale-dhamaadka; sidaa darteed kooxaha horumarintu waa inay adeegsadaan shabakad gudbinta waxyaabaha (CDN). Waxaa jira laba sababood oo waawayn oo ay suuqleyda iyo IT uga taxaddaraan CDN-yada:
CDNs waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta beddelaadda macaamiisha
Daraasaduhu waxay muujinayaan in waqtiyada xamuulka gaabiska ahi ay yihiin tirada ugu horreysa ee in ka badan 70% dadka wax ka iibsada ee internetka ka taga ay kaxeeyaan. Sida laga soo xigtay hal daraasad, "saddex meelood laba meelood dadka wax iibsada ee Boqortooyada Midowday iyo in ka badan kala badh dadka Maraykanka ku nool ayaa sheegaya in gaabiska goobta uu yahay sababta ugu weyn ee ay uga tagayaan iibsiga". CDN wuxuu hagaajin karaa waqtiyada xamuulka bogga wuxuuna yareyn karaa daahitaanka websaydhkaaga, taas oo iyaduna gacan ka geysan doonta beddelaad hoggaamineed oo ballaadhan. Waqtiga xamuulka ee la hagaajiyay wuxuu macnaheedu noqon karaa farqiga u dhexeeya khibrad aad u liidata iyo adeegsi wanaagsan markaad ku jirto qadka taleefanka gacanta.
Si dhakhso leh ayaa loogu talagalay CDN-keeda si ay u siiso kooxaha horumarka wadarta guud ee sida ay ugu adeegaan nuxurka, iyaga oo u oggolaanaya inay nastaan ​​oo la hubo in dadka wax iibsanaya ee internetka ay arki karaan - iyo, ka sii muhiimsan, iibsashada - alaabada si guul leh. Si dhakhso leh CDN ayaa ku kaydiya waxyaabaha ku jira server-yada, taas oo macnaheedu yahay in marka isticmaaleyaashu ay kudhawaadaan boggaaga, codsigooda kaliya waa inuu u safraa illaa inta server-ka juquraafi ahaan ugu dhow iyaga, ma aha dhammaan jidka dib ugu noqoshada server-ka asalka ah (taas oo laga yaabo inay quruxsan tahay ka fog halka ay isticmaaleyaashaadu ku saleysan yihiin). A sahan dhawaan waxay ogaadeen in 33% macaamiisha ay u badantahay inay wax ka iibsadaan shirkad khadka tooska ah ku jirta haddii ay la kulmaan waxqabad liita oo goobta ah iyo in 46% ay aadi doonaan websaydhada tartamaya. Si loo hubiyo khibrad wanaagsan oo si weyn u kordhisa fursadda uu macaamilku ugu soo laaban doono websaydhkaaga mustaqbalka, nuxurka waa in loo galiyaa dadka isticmaala sida ugu dhakhsaha badan.
Xogta laga helo CDN-yada ayaa si dhab ah u ogeysiin kara istiraatiijiyadda suuqgeyntaada
Tafaariiqda 'Omnichannel' waxay noqoneysaa xaaladda hadda taagan; Dukaameeysatadu waxay baaritaan ku sameeyaan walxaha qadka iyo moobiilka ka hor inta aysan aadin dukaanka jirka si ay uga dukaameystaan. Sida laga soo xigtay Adweek, 81% dadka wax iibsanaya waxay cilmi baaris ku sameeyaan internetka ka hor intaadan iibsan, laakiin 54% dadka wax iibsada ee internetka waxay rabaan inay dhab ahaantii arkaan sheyga ka hor inta aysan iibsan. Marka la eego isbeddelladan, suuqleydu waxay u baahan yihiin inay go'aamiyaan sida dadaalka suuqgeynta ee internetka loogu guuleysto ay tahay (emayllada, dhiirrigelinta, xayeysiinta iyo warbaahinta bulshada) marka la eego isku xirnaanta iibka dukaanka.
CDN waxay kaa caawin kartaa inaad ku wargeliso istiraatiijiyad suuqgeynta internetka, iyadoo kooxaha siineysa aragti ku saabsan sida suuqgeynta qadka ay u taageereyso iibka dukaanka, iyo sameynta ololeyaasha u dhowaanshaha suuqgeynta. Baadhitaanka Degdegga ah ee GeoIP / Juqraafiga, suuqleydu waxay awood u leeyihiin inay isbarbar dhigaan aragtida bogga shey gaar ah ayna muujiyaan isku xirnaanta udhaxeysa baaritaanka khadka tooska ah iyo iibsashada dukaanka. Tusaale ahaan, suuqleyda dhijitaalka ah waxay u isticmaali karaan Tiknoolajiyad dhaqso badan si ay geo-xayndaab ugu galaan dhowr mayl oo u dhow dukaanka, oo ay fiiriyaan muuqaalka bogga Analytics shay gaar ah. Iibinta dukaanka waa la isbarbar dhigi karaa laguna barbardhigi karaa aragtida bogga internetka si loo go'aamiyo haddii uu jiro xiriir u dhexeeya dukaameeyaha oo ka daawanaya internetka ka dibna wax ka iibsanaya dukaamada, iyo suuqleydu waxay la jaan qaadi karaan dadaalka dhiirrigelinta si waafaqsan.
Codsiyada beecinta ayaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo xogta ku saabsan dabeecadaha macaamiisha iyo bartilmaameedka macaamiisha iyadoo lagu saleynayo doorbidida, u dhawaanshaha, iwm. Si loo kordhiyo kaqeybgalka - walxaha muhiimka ah ee istiraatiijiyadda suuqgeynta casriga ah. Adeegsiga CDN-ka leh keydadka cariishka ah si loo joojiyo laydhadhka raadraaca ee ka ag dhow macaamilka ayaa dardargelin kara dalabinta arjiga isla markaana fududeyn kara ururinta xogta suuq geynta muhiimka ah.
Qalabka kormeerka waxqabadka sidoo kale wuu caawiyaa
Haddii aad tahay nooca suuqleyda ee si joogto ah u wada ololeyaasha iyo baaritaanka A / B, waa inaad isha ku heysaa sida ay shaqadaadu u saameynayso waxqabadka websaydhkaaga.
Qalabka kormeerka waxqabadka websaydhku wuxuu u oggolaan karaa suuqleyda inay kormeeraan dhammaan walxaha ku jira websaydhka iyo codsiyada moobiilka. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tijaabiso oo aad kasbato Analytics wax kasta oo ka mid ah kaabayaasha goobta, oo ay ku jiraan xogta sida waqtiyada isku xirnaanta, jawaabta DNS, raad raaca, iwm. La socoshada qalabka 'synthetic', boggaga waxaa laga tijaabin karaa bey'ad "sheybaar nadiif ah", taas oo si gaar ah faa'iido u leh marka la isku dayayo in la go'aamiyo sida cusub Muuqaalka lagu daray bog (sida xayeysiinta ama raadinta pixel) waxay saameyn ku yeelan doontaa waxqabadka boggaaga oo dhan, oo markaa go'aamiya haddii ay runti bixinayso ROI togan. CDN casri ah ayaa dardar gelin kara isla markaana toosin kara imtixaanka A / B, taasoo u oggolaanaysa suuqleyda inay u eegaan natiijooyinka waqtiga dhabta ah iyagoo ilaalinaya waxqabadka goobta ugu habboon.
Suuqgeyaashu sidoo kale waxay inta badan ku daraan waxyaabo "dhinac saddexaad ah" boggooda internetka ama barnaamijkooda moobiilka - waxyaabaha ay ka midka yihiin plugins-ka warbaahinta bulshada, fiilooyinka fiidiyowga ah, sumadaha raadinta, iyo xayeysiinta. Laakiin nooca noocan ah ee dhinac saddexaad ayaa inta badan yareyn kara waxqabadka goobta. Tani waa tusaale kale oo wanaagsan oo ah sababta kormeerka waxqabadka uu muhiim u yahay - sidaa darteed sheybaajyada iyo waxyaabaha lagu daro ee loo adeegsado websaydhka ma u keenaan inay tartiib tartiib u shiraan ama u shilmaan.
Daraasadda kiisaska shabakadda-gudbinta - Karbaash
Stripe waa madal lacag bixin ah oo ka baaraandegta balaayiin doolar sanadkii boqolaal kun oo shirkado ah, laga bilaabo bilowga bilowga ilaa shirkadaha Fortune 500. Sababtoo ah aqbalida lacagtu waa halbawlaha ganacsi kasta, Stripe wuxuu ubaahanyahay hab wax ku ool ah oo loogu adeego hantidooda ma guurtada ah si deg deg ah iyadoo ilaalinaysa nabadgelyada adeegsadayaashooda. Markaad dooraneyso CDN, Stripe waxay raadsatay lammaane ka caawin kara iyaga inay ilaashadaan kalsooni sarreysa iyagoo waliba ku habboon waxqabadka. Stripe wuxuu u jeestay si dhakhso leh, taas oo ay si aad ah ugu fududahay in la qaabeeyo isla markaana la siiyo taageero macaamiil heer sare ah.
Awoodda dhaqsaha leh ee lagu dedejinayo waxyaabaha firfircoon iyo keydinta hantida ma guurtada ah ayaa gacan ka geysatey yareynta waqtiga xamuulka ee Stripe Checkout (oo ah foomka lacag bixinta ee gundhigga u ah desktop-ka, kaniiniga iyo aaladaha gacanta) in ka badan 80%. Tan waxaa loo tarjumay faa'iidooyin muhiim ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Stripe: macaamiisha ugu dambeysa ee xiriirka mobilada, waa farqiga u dhexeeya khibradda iibsashada abysmal iyo midka wanaagsan. Ganacsiyadu waxay u isticmaalaan karbaash siyaabo kala duwan, laakiin guddiga oo dhan ku qanacsanaantooda Stripe ayaa ka sarreeya - khibradda ay siiyaan macaamiishooda ayaa ka sarreysa - marka waxqabadku si aad ah u fiican yahay.
Eeg Daraasadda Kiiska
Tags: cdncdn kiis daraasadshabakada bixinta nuxurkadhakhso lehwaxqabadkakormeerka waxqabadkakarbaashwaxqabadka bogga